Amanyathelo ama-7 kwiNtengiso yeDijithali yeNirvana | Martech Zone
Njengoko siphumeza izicwangciso zedijithali kunye nabaxumi bethu, ndiyoyika ukuba asibonisi kwaye sichaze eso sicwangciso njengoko sinokubakho. Ndiyayixabisa kakhulu i-Smart Insights ngokubeka ndawonye lo mbono wesicwangciso esibanzi, esiphumelelayo sokuthengisa kunye namanyathelo ekufuneka uwathathile. Ndifuna ukusebenza nabaxumi bethu ukubonisa ngcono le ndlela kwaye sisebenzise impumelelo yethu.
I-infographic entsha ye-Smart Insight icacisa amanyathelo onokuwathatha ukuphucula indlela osebenzisa ngayo intengiso yedijithali. Ukukunceda uthelekise inkqubela phambili yakho kunye namanye amashishini afake iziphumo kuphando lwabo lwamva nje lokujonga ukuba ingaba ishishini linjani ukulawula intengiso yedijithali, ingxelo yasimahla.
tags: isicwangciso sokuthengisaukuqonda okuhle
Socialbungy: Iqonga lakho lokuThengisa oontanga